एक टुक्रा सपना « Harekpal
एक टुक्रा सपना
– राजिव आचार्य – October 9, 2021
– राजिव आचार्य –
पर्सि नामसारी गर्ने बेलामा अरू पन्ध्र लाख लिने सर्तमा गाडी राम्ररी देखाई पाँच लाख बैना लिएर भैरव, खलासी बिरेसँग घरतिर लाग्दा, झमक्क साँझ परिसकेको थियो । दुई सालअघि मात्र रात्रि बसको एकलौटी साहु र चालक भएको ऊ, गाडी पर्सिदेखि अर्कैको हुने भो भन्ने दुःखभन्दा बढी त्यो पैसाले आफ्नो छोराको सपना पूरा गर्न पाइने भइयो भन्ने कुराले खुसी थियो । हुन त, बितेका पच्चीस वर्षअघि अल्लारे जोवनमा पहाडबाट झरेर खलासीबाट काम सुरू गरेको थियो उसले । आजको दिनसम्म आउँदा यो गाडी मात्र नभई सहरमा एउटा घर, सुशील पत्नी, मेधावी छोरा र असल छोरी पनि जोडिसकेको थियो उसले।
यसपालि छोराले उच्च श्रेणीमा बाह्र कक्षा पास गरी अस्ट्रेलियाको राम्रो कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि नाम निकालेको थियो । जम्मा गर्नु पर्ने फिस, टिकट, भिसा आदि सबैथोक गर्दा तीस लाखभन्दा उकालो लाग्ने पर्यो । साथीभाइसँग ऋणपान, स्वास्नी, छोरीका गरगहना र यो गाडीको दामबाट बल्ल खर्च जुट्ने देखियो । आजको पन्ध्र दिन भित्र उड्ने गरी टिकट पनि भइसकेको थियो ।
छोरा डाक्टर भएको सपना, त्यसबाट छोरीको पनि राम्रो भविष्य, आफ्नो र श्रीमतीको गौरवान्वित जिन्दगी आदि कल्पेर कुद्दाकुद्दै पान्धारे जङ्गल पुग्दा आधा रात हुन लागेको थियो । आफ्ना आगामी दिनको सपनामा रम्दारम्दै अगाडिको मोटर साइकललाई ओवरटेक गर्ने क्रममा कतिखेर पछाडिको भागले मोटरसाइकललाई हिर्काएछ; उसलाई पत्तै भएन । करिब पन्ध्र मिटरअघि पुगेर गाडी रोकी झ्यालबाट हेर्दा मोटर साइकलमुनि थिचिएर सकी नसकी घाइतेले हात उठाएर मदतका लागि इसारा गरेको जूनको उज्यालोमा प्रस्टै देखिन्थ्यो । अनुहार भने देखिँदैन थियो; हेल्मेटले छेकिएको थियो ।
‘गुरुजी, मान्छे बाँचे पनि खुट्टा चाहिँ पच्याक पुचुक भएछ ।’ – बिरे छेउमै गएर चिच्च्यायो ।
एक्कासि भैरवको आँखा अगाडि अँध्यारो भएर आयो । पुलिस, अड्डा अदालत, क्षतिपूर्ति, छोराको सपना बेकार भएको अनि कुसङ्गतमा परेको, श्रीमतीको हन्टर, छोरीको बिजोग आदि दृश्यहरू उसको आँखाअघि नाच्न थाले । दुवैतिर परपरसम्म सडक सुनसान थियो । एक्कासि उसको मनमा के आयो, गाडी ब्याक गरेर घाइतेभन्दा दस मिटर पछाडि लगेर रोक्यो अनि तेज गतिले गाडी अगाडि बढाएर घाइतेको छातीमाथि कुल्चेर लग्यो । बिरे फुत्त गाडीमा चढ्यो । अलिकति अगाडि बढेपछि गाडी सिधा नगई जङ्गल पसेर जामुनेको घुमाउरो बाटो भएर सुन्दरपुरतिर लाग्यो।
गाडी ग्यारेजमा थन्क्याइवरी घर पुग्दा आधा रात भैसकेको थियो ।
‘म केही खान्न है ।’ – यति मात्र भनेर ऊ सिधै ओछ्यानमा गएर पल्ट्यो ।
फेरि यताउता हेरेर सोध्यो – ‘समीर देख्दिनँ त ।’
–‘खोइ दिउँसै निकेशकहाँ गँको ।’ –श्रीमतीले जबाफ दिइन् ।
भैरव उठ्यो र फोनमा केके नम्बर डायल गर्यो । उताबाट कोही बोलेछि सोध्यो– ‘समीर आज तेतै बसेको हो ?’
–‘हैन त अङ्कल, दिउँसो आ’को थियो । प्रमेसको मामाको पार्सल अस्ट्रेलिया लानुपर्ने भयो रे, हिँड्, भन्दै थियो । मैले भ्याइनँ अनि ऊ मेरो बाइक लिएर एक्लै प्रमेसको मामाघर हरिनगर गाको थियो । म त सिधै त्यतै आयो होला भनिरा ।’ – उताबाट उत्तर आयो ।
ऊ अचानक झस्क्यो ।
‘हँ… ! तिम्रो बाइक त त्यो रातो… ।’– उसले आफ्नो कुरा पनि पूरा नगरी फोन काट्यो र अर्को नम्बर डायल गर्यो । केहीबेर घन्टी बजेपछि उताबाट राम्ररी बोल्न नपाउँदै अत्तालिएर सोध्यो – ‘हेलो ट्राफिक अफिस, आज पान्धारे जङ्गलमा भएको दुर्घटनामा परेको पीडितको केही पत्तो ….?’
उताबाट जे उत्तर आयो; त्यो सुन्नासाथ उसको मुहार भयानक भयो । नौ नारी गलेर आयो । जिउ थाम्न नसकी भुइँमा लड्यो । हातबाट रिसिवर भुइँमा झरेर फुटेसँगै भैरवको एक टुक्रा सपना छताछुल्ल भएर पोखियो।
थारु समुदायमा सखिया नृत्यको रौनक हराउँदै
‘नगेन्द्रराज शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ’ सार्वजनिक
कवि सुरेन्द्र अस्तफलको ‘तेल भिसा’ लोकार्पण
औपन्यासिक तत्त्वहरूका आँखामा ‘अतृप्ति’
पौडेल विमुन्सका दुई लघुकथा